Rụzie igwe okwu gị na Google Duo maka iPad
Nwaleenụ igwe okwu gị n'ịntanetị wee chọta ntuziaka iji dozie ya
Igwe okwu ule na-enye gị ohere ịnwale igwe okwu gị na ihe nchọgharị gị. Ọ na-enyekwa ntuziaka banyere otu esi edozi igwe okwu gị na ọtụtụ ngwaọrụ yana ọtụtụ olu na oku vidiyo.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na igwe okwu gị agaghị arụ ọrụ. Nwere ike ịnwe nsogbu okwu okwu ma ọ bụrụ na ngwa ahụ iji igwe okwu enweghị ntọala ziri ezi. Ma ọ bụ igwe okwu nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ọ bụla na ngwaọrụ gị, n'agbanyeghị ngwa ị na-eji.
Mgbe ịmalitesịrị ule ahụ, kwuo okwu n'olu dara ụda na igwe okwu gị ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ị ga-ahụ ụda ebili mmiri na-acha na-apụta ma na-apụ n'anya. Ọ bụrụ na igwe okwu gị anaghị arụ ọrụ, ị ga-ahụ ozi ezighi ezi. N'ọnọdụ ahụ ị nwere ike ịlele ntuziaka iji dozie okwu okwu okwu maka ngwaọrụ gị ma ọ bụ ngwa gị.
Site na iji igwe okwu anyị anwale nzuzo gị kpamkpam: echekwaghị data ọ bụla na ntanetị, olu ma ọ bụ ụda ị na-edekọ anaghị ahapụ ngwaọrụ gị. Lelee ngalaba "Enweghị nnyefe data" n'okpuru iji mụtakwuo.
Ntuziaka iji dozie nsogbu okwu
Họrọ ngwa na ngwaọrụ ịchọta ihe akọwapụtara maka idozi nsogbu okwu okwu gị